Hiyyummaan Mirga-dhabdummaan fi Mootummaan Akka Malee Aangootti Dhimma-ba’uun Finxaaleyyii Afrikaa Keessattif Sababa jedhame
Fulbaana 07, 2017
Faayilii - Milishoota Al-Shabaab
Hiyyummaan, mirga-dhabdummaan fi mootummaan akka malee aangootti dhimma-ba’uun akka dargaggoonni gara dhaabota finxaaleyyii akka Bokoo_haraam, Al-shabaab fi Islaamik Isteetitti seenan taasisaa jira – jedha - gabaasaan Tokkummaa Mootummootaatiin bahe tokko.
Bifa qorannaan isaatiin ka jalqabaa ka tahe – qorannoon waggaa lama fudhate kun, dargaggoota fedha isaaniittiin gaaffii fi deebii kennuuf ehaman dhibba afurii fi sagaltamii shan, kanneen duraan dhaabota fiinxaaleyyiitiin to’atamanii turan haasofsiisuudhaan ka qopheessame.
Gaaffii fi deebiin dargaggoota kana waliin geggeessame, akkaataa isaan itti duraan gurmuulee shororkeessotaa keessatti itti fo’ataman, ilaalcha dogoggoraa jiru, sababaa kanaan balaa dhufaa jiruu fi tarkaanfii jijjiirama fidu fudhachuuf carraa jiru irratti ka fuuleffate.
Kana irraa ka’uudhaan, Afrikaa keessatti babal’achuu finxaalessummaa sababaa tahan kan ittiin jedhe, mirga dhabdummaa, iyyuma, hanqina misoomaa fi jireenya moggaatti qoodamuu akka ijootti tarreessee jira.
“Lammiwwan Afrikaa ardii Afrikaa walakkaa dhaa ol tahan, daangaa sadarkaa hiyyummaa tii gaditti jiraatu” kan jedhu - dhaabbatni Maallaqa Misoomaa, ka Tokkummaa Mootummootaa, Afrikaan fiinxaalessummaa hidda gad-fageeffateef akka saaxilamaa jirtu akeekkachiisa.
Gama biraatiin internaatiin Afrikaa keessa babal’ataa jirutti, dargaggoota gara dhaabota shororkeessotaatti fo’achuun akka hammaachuu malu illee gabaasaan Tokkummaa Mootummootaa kun akeekkachiisee jira.
Bubbeen garba Atilaantik irraa bubbisaa Amerikaa godina Filoriidaatti dhiyaatte Irma jedhan waan lubbuuf sodaatan, namnii ya baqaaf karaatti duude
Angawaan Mootummaa Oromiyaa Afaan Oromoo Afaan Federaalaa Gochuu Irratti Hojjachaa Jirra Jedhan
Kaameruun Kaaba-Dhihaa Keessatti Eega Poolsiin Dardara Tokko Ajjeesee Booda Hookkarri Kaleessa Ka’e Itti Fufee Jira
Bulchiinsii mootummaa Pirez.,Tiraampi sagantaa ijoollee biyya ormaaatii seera malee Amerikaan dhufaniin gargaaran, DACA dhaabuuf hajaje
Jiraataa: Baabbilee Keessatti Gidduu Kana Nama Sadiitu ajjefame